‘सहकारी मैत्री कानुनहरु बनिरहेका छन् ‘ – Tandav News
‘सहकारी मैत्री कानुनहरु बनिरहेका छन् ‘
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ चैत्र २० गते बुधबार १५:२४ मा प्रकाशित 79
सहकारीमा सर्वसाधरणको आर्कषण किन छ ?
सहकार्य गर्नु नै सहकारी हो । हरेक व्यक्तिहरु मिलेर आ–आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि सहकार्य गर्ने माध्यम सहकारी हो । हरेक आवश्यकता पूरा गर्नलाई सहकारीको माध्यमबाट सम्भव छ । सर्वसाधरणलाई सानासाना व्यापार व्यवसाय, कृषिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सहकारीले मद्दत पु¥यारहेको छ त्यसैले पनि सहकारीमा सर्वसाधरणको आर्कषण बढ्दो छ ।
सहकारीका समस्या के–के हुन् ,समस्या समाधानका लागि के –कस्ता पहल भइरहेको छ ?
मुख्यतया सहकारीका समस्या भनेको ऐन कानुन हो । ऐनकानुनहरु बनिरहेको अवस्था छ । सहकारी अझै उत्पादमुखी बन्न सकिरहेको छैन । उत्पादन भएका उत्पादित वस्तुको व्यवस्थित बजारीकरण हुन सकेको छैन । यो नै सहकारीका समस्या हुन् । यसका लागी पहल भइरहेको छ । उत्पादित वस्तुलाई सुरक्षित बजारको लागि पहल भइरहेको छ । सहकारी संस्थामा पर्ने समस्याहरुलाई विधिवत रुपमा कानुन बनाउने ठाउँमा पु¥याउने काम भइरहेको छ ।
सहकारीका स्थानीय र प्रादेशिक ऐन कस्तो छ ?
अहिले सम्म सहकारीका राम्रै ऐन आएको छ । ऐन कानुहरु बनिरहेको छ । संघीय कानुन आएको छ । नियमावली आउन बाँकी छ । प्रदेश र महानगरको कानुन आएको छ नियमावली आउन बाँकी छ । सहकारी मैत्री कानुनहरु बनिरहेका छन् ।
सहकारीलाई समृद्धि तर्फ लैजान के गर्नुपर्ला ?
सहकारीलाई समृद्धितर्फ लैजान सर्वप्रथम सहकारीलाई उत्पादनशील बनाउनु पर्छ । निष्क्रिय रहेको पुँजीलाई परिचालन गरेर, निष्क्रिय रहेको सिप ज्ञानलाई परिचालन गर्न सक्यौ भने सहकारीको समृद्धि सम्भव छ । सबैलाई गोलवद्ध गरेर यसमा आवद्ध सदस्यहरुको ज्ञान र प्रविधिलाई उजागर गरी उत्पादशील क्षेत्रमा लगाएर उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगार सिर्जना गर्न सके सहकारी समृद्धिमा पुग्न समय लाग्दैन ।
अन्त्यमा ६२ औँ सहकारी दिवस मनाइरहँदा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
देशैभरि ६२ औँ राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा सबै सहकारीकर्मीहरुले आफूलाई अझै निखार्दै, अनुशासित बनाउँदै अगाडि बढाउनुपर्छ । के काम गर्दा हाम्रा सदस्यको हित हुन्छ, सदस्यहरुको आर्थिक र समाजिक समृद्धितर्फ हामी केन्द्रित हौँ यही भन्छु ।